Ogaden News Agency (ONA) – War dag-dag ah – Weerar lagu qaaday xerada Wayaanaha Ceelxaar oo lagu dilay sargaalkii haystay
War dag-dag ah – Weerar lagu qaaday xerada Wayaanaha Ceelxaar oo lagu dilay sargaalkii haystay
Posted by ONA Admin	/ February 8, 2013
ONA jicme (08 FEB 2013) War Deg Deg ah oo hadda naga soo gaadhay Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa sheegaya weerar xoogan oo ay saaka ku qaadeen cutub ka tirsan NH/CWXO fadhiisin ay Askarta wayaanuhu ku lahaayeen Tuulada Ceelxaar oo ku taala duleedka Magaalada Qabridahar ee xarunta Gobolka Qoraxay Weerarkan oo ahaa mid qorshaysan ayaa waxaa askarta wayaanaha lagaga dilay Tiro ciidamo ah oo uu kamid ahaa Sargaal lagu magacaabo KORNAYL ABRHAHA,waxaana dagaalka saakay lagaga furtay hub iyo qalab milatari oo uu kamid ahaa Taleefanka Thurayaha.
Wararka kale ee naga soo gaadhaya Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa sheegaya dagaalo ka dhacay meelo kala duwan oo kamid ah dalka Ogaadeeniya. Waxayna u kala dhaceen sidan;
04/02/2013 Dagaal xoogan oo dhacay Deegaanka lagu magacaabo Bardaaxle oo katirsan magaalada Dhagaxbuur ayaa waxaa askarta gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 5 Askari waxaana lagaga dhaawacay 3 kale.
01/02/2013 Dagaal culus oo ku dhex maray CWXO iyo Askarta daalan ee gumaysiga Ethiopia Deegaanka lagu magacaabo Maakule oo Iimay-bari ka tirsan ayaa waxaa ciidamada xukuumada gabalkeedu sii dhacayo lagaga dilay 17 Askari waxaana lagaga dhaawacay 24 kale.
19/01/2013 Deegaanka lagu magacaabo Dayr oo Awaare dhow dagaal ka dhacay ayaa waxaa askarta gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 2 Askari waxaana lagaga dhaawacay 3 klae.
29/01/2013 Deegaanka Qurux-boob oo Nogob ka tirsan ayaa waxaa lagu dilay hal Askari waxaana lagu dhaawacay 3 kale.
30/01/2013 Deegaanka Taaginduur oo dhaxbuur katirsan dagaal ka dhacay halkaasi waxaa askarta gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 5 Askari waxaana lagaga dhaawacay 10 kale.
Waxaa iyaguna jira dagaale kale oo aad uxoogan oo ka kala dhacay Deegaanada kala ah Bukudhabo,Dayr ,Sanbeedo iyo Higlaley oo dhammaantoo kawada tirsan Gobolka Jarar kuwaaso oo askarta gumaysiga Ethiopia logu soo gaadhsiiyey khasaare balaadhan